jCryptTool: chishandiso chekudzidza cryptography | Linux Vakapindwa muropa
jCrypTool: dzidza cryptography neichi chishandiso
CrypTool chishandiso chinonakidza kwazvo cheWindows, asi icho zvakare chiripo jCrypTool zvichibva paJava uye kuti tinogona kumhanya paLinux, yatisingashandise Microsoft's operating system. Nayo tinogona kudzidza nezvayo cryptographic maitiro.
Isu tinoziva kuti kune akawanda maturusi ekuti nyora uye nyora data, asi havazi vazhinji vanoziva nezvekuti data rakanyorwa sei uye rakabvarurwa. Naizvozvo, jCrypTool inokurudzirwa zvakanyanya kuti udzidze nezve cryptography uye kuyedza nekrisptographic algorithms.
Naye isu tichadzidza maitiro acho data encryption graphic kuitira kuti chero mushandisi agone kunzwisisa maitiro acho. jCrypTool inotsigira akasiyana ekare uye echizvino encryption algorithms, ruzivo nezve ivo uye nekudyidzana navo.
Iko kushandiswa kuri vakasununguka uye vakasununguka y inogona kuwanikwa kubva kune webhusaiti yeprojekiti (cryptool.org) kana kubva kune zvimwe zviwanikwa, senge sourceforge.net kana github.com. Paunongotora tarball yakakodzera iwe yaunowana mune iyi link yandinokusiira, unofanirwa kuiburitsa. Kana uchinge waburitswa, tinya kaviri paJcrypTool icon mukati uye ichavhura (zviri pachena kuti tinoda kuve neJava yakaiswa).
Mamwe mashoko - Cryptography Dzidziso
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » jCrypTool: dzidza cryptography neichi chishandiso
Q4OS, distro ine dhizaini yeWindows XP kune diki diki
Rescatux 0.32 b2 - Kununura distro kugadzirisa Linux neWindows boot kana kuseta password